यसरी गर्न सकिन्छ व्यक्तित्व विकास! – NawalpurTimes.com
यसरी गर्न सकिन्छ व्यक्तित्व विकास!
प्रकाशित : २०७६ माघ १९ गते १०:१६
हरेक मानिसको आ आफ्नो व्यक्तित्व हुन्छ। व्यक्तित्व मानिसको आचरण हो। व्यक्तित्व बाहिरी आवरणमा मात्र भर पर्ने कुरा होइन, आफूलाई अरुसामु कसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हो। रुप , अनुहार र पहिरनले मात्र व्यक्तित्व निर्धारण गर्दैन।
आफ्नो कस्तो पहिचान बन्छ भन्ने कुरा पनि व्यक्तित्वकै आधारमा तय हुन्छ। यसकारण कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति गर्न व्यक्तित्व प्रभावशाली बनाउनु जरुरी छ। प्रभावशाली व्यक्तित्वबिना सफलता प्राप्त गर्न असम्भव हुन्छ।
१. आन्तरिक क्षमता– आन्तरिक क्षमता सफल जीवनका लागि महत्वपूर्ण पक्ष हो। यस्तो शीपले दैनिक जीवनमा वा मानिसहरूसँग साक्षात्कार गर्दा उपयोगी साबित हुन्छ। यस्तो क्षमता भएका व्यक्तिलाई समूहले पनि आवश्यकता महसुस गर्छ। प्रोफेसनल जीवनमा मात्र नभएर व्यक्तित्व विकासमा पनि आन्तरिक क्षमताले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ।
२. असल श्रोता – असल व्यक्तित्वका लागि श्रोता बन्न अति नै आवश्यक पर्छ । एकतर्फी शिक्षाले केही कुरा सिक्न सकिन्छ, न त कसैलाई प्रभावित पार्न नै सकिन्छ । एउटा असल श्रोता बन्न सकेमा साथीहरुको ज्ञान बाट थुप्रै कुरा सिक्न सकिन्छ। त्यसैले पनि बब्क्ता मात्र नबनी उत्कृष्ट श्रोता बन्नु पनि आशश्यक छ। र यो एउटा राम्रो कला पनि हो। तपाईंले कसैको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्दै हुनुहुन्छ भने उसले ठान्छ कि ‘मलाई महत्व दिएको छ। ’ यो तपाईको व्यवहारले आत्मीयताको पनि विकास गर्छ।,
४. प्रतिबद्धताप्रति प्रतिबद्ध – इमानदारी वा प्रतिबद्धता व्यक्तित्व विकासका लागि निकै महत्वपूर्ण तत्व हो । यदि तपाईंले कसैसँग वाचा गर्नुभएको छ भने त्यसलाई पूरा गर्न अत्यावश्यक हुन्छ । यस्तो व्यवहारले अरूबाट सम्मान र प्रशंसा आर्जन गर्न सकिन्छ । अरूभन्दा फरक देखाउनका लागि पनि यस्तो व्यवहारले मद्दत र्पुयाउँछ ।